News - Macluumaadka mustaqbalka ee daawada xoolaha
Waqtigan xaadirka ah, warshadeena dhul-beereedka gudaha waxay ku socotaa jihada takhasuska iyo cabirka. Beeraleyda dhaqanka ayaa ku biiraya iskaashatooyin xirfadlayaal ah. Horumarka suuqa, iibka iyo isticmaalka dawooyinka xoolaha ayaa bilaabay inay wax ka bedelaan, kuwaasoo bilaabay inay saameyn ku yeeshaan soo saarista iyo iibinta baakadaha dhalada ee daawada xoolaha.
Marka hore, baakadaha dhalada ee daawada xoolaha waxay u baahan tahay naqshad iyo horumarin xirfadeed oo dheeri ah. Baakadaha dhalada ee dawada xoolaha dhaqameed looma bartilmaameedsado, wax soosaarayaal kooban ayaa u sameeyay suuqa dhalada daawada xoolaha. Hadda, isbeddelada ku yimid suuqa dawada xoolaha, taranka xirfadleyda baaxadda weyn waxay u baahan tahay horumarinta bartilmaameedka dhalooyinka daawada xoolaha si ay ula jaan qaadaan suuqa. Ta labaad, u janjeeridda awoodda dhalooyinka daawada xoolaha ee isbeddelada awoodda ballaaran. Beeraleyda dhaqameed waxay leeyihiin miisaan yar, dhaqan yar, iyo dabiici ahaan tiro yar oo ah daawooyinka xoolaha. Si kastaba ha noqotee, beeraleyda baaxadda weyn waxay qaataan wax soo saar xoogleh waxayna u baahan yihiin dhalooyin waaweyn oo daawada xoolaha ah si ay u daboolaan baahidooda.
Baakadaha dhalada ee daawada xoolaha ayaa wajihi doonta xirfadlayaal xirfadlayaal ah mustaqbalka, waxayna sidoo kale si adag uga shaqeyn kartaa dhinacyada isku xirnaanta macluumaadka xirmooyinka si kor loogu qaado horumarka dhammaan warshadaha daawada xoolaha.